#Real Betis 0 Barcelona 5: Messi, Suarez ayaa ku hogaaminaya hogaanka horyaalka 11 dhibcood oo nadiif ah | Get Latest News From Horn of Africa
Home Somali #Real Betis 0 Barcelona 5: Messi, Suarez ayaa ku hogaaminaya hogaanka horyaalka...
#Real Betis 0 Barcelona 5: Messi, Suarez ayaa ku hogaaminaya hogaanka horyaalka 11 dhibcood oo nadiif ah
Lionel Messi iyo Luis Suarez ayaa laba gool dhaliyey iyadoo Barcelona ay 5-0 ku dubatay kooxda Real Betis Axadii.
Barcelona ayaa gaartay guul muhiim ah, waxeyna sare u qaaday dhibcahii hogaanka La Liga madama ay xasuuqeen Real Betis, waxeyna ka faa’ideysteen lugooyadii ay la kulantay kooxda kaalinta labaad ee Atletico Madrid oo barbaro la gashay Girona.
Barcelona waxey ku adkaatay shan gool iyadoo Lionel Messi uu sadex gool ka qeyb qaatay – 2-gool iyo 1-caawinaad ah, sido kalana Luis Suarez ayaa dhaliyay 2-gool sidoo kalana caawiyay 2-gool, halka Ivan Rakitic uu dhaliyay gool midna uu cawiyay.
Qeybtii labaad ee ciyaarta ayey Blaugrana sameeyeen wax aan caadi aheyn, waaxeyna dib ugu soo laabteen wadadii guulaha madama ay guuldaro kala kulmeen Espanyol lugtii hore wareega quarter finalka Copa del Rey.
Barcelona haatan waxey leedahay 54-dhibcodo iyadoo 11-dhibcood ka sareysa Atletico Madrid oo leh 43-dhibcood, halka ay 19-dhibcodo ka sareeyaan Real Madrid oo 35-dhibcodo leh, balse kulan gacanta ku heysata.
Natiijadaan ayaa u dirtay kooxda Ernesto Valverde inay 11 dhibcood oo nadiif ah hogaanka ku qabtaan, Inkasto ay Atletico Madrid ay barbaro la gashay Girona iyo Valencia lugtii hore dabka la soo sarey Las Palmas.